I-Raw Dutasteride powder (164656-23-9) hplc =98% | AASraw abaphakeli
/ iimveliso / Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones / Dutasteride powder
SKU: 164656-23-9. Udidi: Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Dutasteride powder (164656-23-9), phantsi kommiselo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Dutasteride powder kungowesigaba seyeza ezibizwa ngokuba yi-5-alpha-reductase inhibitors. Isetyenziselwa ukunciphisa iimpawu ze-prostatic hyperplasia (BPH) kwindoda eneziqhenqa ezandisiweyo. I-BPH yinkqubo yokungabonakali kwengqungquthela ye-prostate gland edlalwa ngamadoda emva kweminyaka eyi-50..I-powderide powder isebenza ukunciphisa imveliso ye-dihydrotestosterone (DHT), ihomoni eyenza ukwandiswa kwe-prostate gland. I-Dutasteride powder eluhlaza ikhulula iimpawu ze-BPH ngokunciphisa ubukhulu beprotate.
Dutasteride powder ividiyo
I-Raw Dutasteride powder ezisisiseko
igama: Dutasteride powder
I-molecular Formula: C27H30F6N2O2
Isisindo somzimba: 528.53
umbala: umhlophe ukuba ube ngumpu
I-Raw Dutasteride powder kwindlela yokujikeleza ngokwesondo
I-Dutasteride powder, i-Avodart powder,
Ukusetyenziswa kwe-Dutasteride powder
I-Dutasteride powder ivimbela ukuguqulwa kwe testosterone kwi-dihydrotestosterone (DHT) emzimbeni. I-DHT ibandakanyeke ekuphuhliseni i-benign prostatic hyperplasia (BPH). I-Dutasteride powder eluhlaza isetyenziselwa ukuphatha i-benign prostatic hyperplasia (BPH) kwindoda ene-prostate eyandisiweyo. I-Dutasteride powder inceda ekuphuculeni ukuhamba kwamanzi kunye nokunciphisa isidingo sakho sokuhlinzwa kweprotate kamva.
Ngamanye amaxesha i powutideide powder inikwe elinye iyeza elithi tamsulosin (Flomax).
Ukwenza i-Adult Dose yeBenign Prostatic Hyperplasia:
0.5 mg ngomlomo kanye ngosuku
Ukusetyenziswa: Unyango lwe-symptaticatic prostatic hyperplasia (BPH) kumadoda ane-prostate eyandisiweyo yokunciphisa umngcipheko wokugcinwa kwe-urinary (AUR) kunye nokuhlinzwa okwenziwe nge-BPH.
I-Dutasteride powder iza njenge-capsule ukuba ithathe ngomlomo. Ngokuqhelekileyo kuthathwa kanye ngosuku okanye ngaphandle kokutya. Thatha i-Dutasteride powder eluhlaza kwixesha elifanayo kwimihla. Landela izikhokelo kwiileyibrari yakho ngokuchanekileyo, uze ucele ugqirha okanye umkhemisi wakho ukuba achaze nayiphi na into ongaziqondiyo. Thatha i-Dutasteride powder eluhlaza ngokuchanekileyo. Musa ukuthatha ngaphezulu okanye ngaphantsi okanye uthathe ixesha elide kunokuba umiselwe ugqirha wakho.
Gcwalisa iifomsile ngokupheleleyo; ungavuli ukuhlafuna, okanye ukuwachoboza.
Iimpawu zakho zingaphucula emva kokuba uthathe i-Dutasteride powder kwiinyanga ze-3, kodwa kunokuthatha iinyanga ze-6 okanye ixesha elide ukuba ubone inzuzo epheleleyo ye-Dutasteride powder eluhlaza. Thetha ugqirha wakho malunga nendlela ovakalelwa ngayo ngexesha lonyango lwakho.
I-Dutasteride powder ingakwazi ukulawula iimpawu zakho kodwa ayiyi kunyanga imeko yakho. Qhubeka uthatha i-Dutasteride powder eluhlaza nokuba uziva kakuhle. Ungayeki ukuthatha i-Dutasteride powder ngaphandle kokuthetha nodokotela wakho.
Buza i-pharmist okanye ugqirha wakho ikopi yenkcazelo yomenzi wesigulane.
Isilumkiso kwi-Raw Dutasteride powder
I-Dutasteride powder ayifanele ithathwe ngumfazi okanye umntwana. I-Dutasteride powder ingabinjwa ngesikhumba, kwaye abafazi okanye abantwana akufanele bavunyelwe ukuphatha i-Dutasteride capsules eluhlaza.
Nangona i-Dutasteride powder eluhlaza ayinakusetyenziswa ngabasetyhini, le nyeza inokubangela ukukhubazeka kokuzalwa xa ibhinqa libonakala kuyo ngexesha lokukhulelwa. Iifomsile ze-Dutasterid powder akufanele ziphathwe ngumfazi okhulelwe okanye onokukhulelwa.
Musa ukuhlafuna, ukuchoboza okanye ukuvula i-Dutasteride i-capsule eluhlaza. Sula i-capsule ngokupheleleyo. I-Dutasteride powder iyakucasula umlomo wakho, umlomo, okanye umqala xa i-capsule iphuliwe okanye ivuliwe ngaphambi kokuba uyiginye.
Ukuba ibhinqa lithe lahlaselwa kunye nalo myeza kwi-capsule ephumayo, hlamba loo ndawo ngesepha kunye namanzi ngokukhawuleza.
Ngaphambi kokuba uthathe i-Dutasteride powder eluhlaza, xelela ugqirha wakho ukuba ngaba unakho ukuphazamiseka kweso siyeza, okanye kwiyeza elifanayo elibizwa ngokuba yi-finasteride (Propecia, Proscar).
Ukusebenzisa i-Dutasteride powder kunokunyusa umngcipheko wokuvelisa umdlavuza wesibeletho. Ugqirha wakho uya kwenza iimvavanyo ukuqinisekisa ukuba awunezinye iimeko ezikuthintela ngokuphepha usebenzisa iDutasteride powder eluhlaza.
Musa ukunikela ngegazi ngelixa uthatha i-Dutasteride powder kunye ubuncinane neenyanga ze-6 emva kokuba unyango lwakho luphela. I-Dutasteride powder eluhlaza ingaqhutyelwa egazini kwaye ibangela ukukhubazeka kokuzalwa xa abafazi abakhulelweyo befumana ukuxilongwa ngegazi equle i-Dutasteride powder.
I-Dutasteride powder yinkampani ye-4-azasteroid eyenziwe yinto ekhethiweyo ye-1 kunye nohlobo lwe-2 isoforms ye-steroid 5-alpha-reductase esetyenziselwa ukuphatha i-prostitutes hyperplasia (BPH) enamadoda ane-prostate eyandisiweyo. I-Dutasteride powder eluhlaza inceda ukuphucula ukuhamba kwamanzi kunye nokunciphisa isidingo sokuhlinzwa kweprotate kamva. Ngamanye amaxesha i powutideide powder inikwe elinye iyeza elithi tamsulosin (Flomax). I-Dutasteride powder eluhlaza ivimbela ukuguqulwa kwe testosterone kwi-dihydrotestosterone (DHT) emzimbeni. I-Dutasteride powder ingafumaneka kwifomu yobudala.
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo ezenzeka ngeDutasteride powder eluhlaza ziquka:
ingxaki yokufumana okanye yokugcina ukulungiswa (ingaqhubeka ngokumisa emva kweDutasteride powder)
kuncipha kwi-sex drive (ingaqhubeka emva kokuyeka i-Dutasteride powder eluhlaza)
Iingxaki zokunyuka (zingase ziqhubeke emva kokumisa i-Dutasteride powder)
zibele okanye zibuhlungu. Ukuba ubona izibilini zesifuba okanye ukukhutshwa kweentomba, xela ugqirha wakho.
Ukuba ezi ziphumo zincinci, zinokuthi zinyamalale kwiintsuku ezimbalwa okanye kwiiveki ezimbalwa. Ukuba ngaba banzima kakhulu okanye abadluli, xela ugqirha wakho okanye utyhemistri.
impendulo. Imizekelo ibandakanya:
ukuvuvukala ubuso bakho, ulwimi, okanye umqala
umdlavuza wesibeletho. Iimpawu zingabandakanya:
ukwanda kwee-prostate-specific antigen (PSA)
ukwanda kwexesha lokuvuthwa
ubunzima bokuqala ukucoca
ukuhamba komchamo obuthakathaka
ukuvuthwa okubuhlungu / okutshisa
ubunzima bokufumana okanye ukugcina ukulungiswa
igazi kwi-urine okanye kwi-semen
intlungu rhoqo okanye ubunzima kwi-back back, emacaleni, okanye emathangeni angaphezulu
I-Dutasteride powder I-Raw Powder
I-Raw Dutasteride powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Dutasteride powder evela kwi-AASraw
I-Dutasteride powder Iidraphu zokupheka eziMdaka: